Ingakanani iTumblr? | Martech Zone
ULwesihlanu, February 28, 2014 Douglas Karr
Kulungile, mhlawumbe umbuzo wokuqala uthi yini iTumblr? I-Tumblr iyi-platform ye-microblogging kanye newebhusayithi yokuxhumana nabantu (manje ephethwe yiYahoo!). Ipulatifomu ivumela abasebenzisi ukuthi bathumele i-multimedia nokunye okuqukethwe kubhulogi lefomu elifushane. Uhlelo lakhiwe ngezindlela zokwabelana nabanye abasebenzisi - ukushayela ithoni lokuzibandakanya nokubonakala kwabantu abalusebenzisayo. Futhi banenhle impela uhlelo lokusebenza lweselula.
Ngenkathi ngingahlali kaningi iTumblr, ngiyayenza yabelana ngokuqukethwe kwethu kubhulogi lami leTumblr ngokusebenzisa Jetpack ukuhlanganiswa ukuthi WordPress wanezela. Ngiphinde ngilandele ama-Tumblr ambalwa futhi ngithola i-imeyili yokuvuselela enhle evela ohlelweni ngokuchithwa kwalokho okwabiwe ngubani. Njengomakethi, ungahle ungazi ukuthi inkulu kangakanani le nethiwekhi. Izinombolo zihle kakhulu!
Ukubuyekezwa Kwamawebhusayithi kubelane ngale infographic konke mayelana neTumblr:
Tags: enkulu kangakanani i-tumblrtumblri-tumblr vs facebooki-tumblr vs i-pinteresti-tumblr vs i-twitteryini tumblr
Lokho Amakhasimende Akho Akucabangayo Ngempela Ngobumfihlo
IMashape Ixhuma Onjiniyela nama-API